Abahlanzayo Abangokwemvelo Nabomhlaba Abangenza Ekhaya - Izixazululo Zasekhaya
Abahlanzayo Abangokwemvelo Nabomhlaba Abangenza Ekhaya
5 Natural Earth Friendly Cleaners One Can Make Home
Esinye sezidingo eziyisisekelo zokunakekelwa kwasekhaya ukuhlanza. Ngenkathi silwela njalo ukugcina indawo yokuhlala ehlanzekile, enhle, nejabulisayo ezungeze thina, yona kanye inqubo yokuhlanza ingaba yingozi futhi ibangele uchungechunge lwezinkinga zezempilo. Eminye yemishini yokuhlanza amakhaya esetshenziswa kakhulu namuhla ithwelwe amakhemikhali afana nePhthalates neTriclosan, atholakala ezinsizeni eziwasha izitsha, okokuxubha amazinyo, neziphunga zokwehlisa umoya ngenkathi ama-sulphates ejwayelekile ezintweni zokuhlanza nasensipho yokuwasha ngisho nakwezinye izifonyo. Lawa makhemikhali abe nomthelela obhalwe phansi kwezempilo futhi aziwa ukuthi ayaphazamisa futhi athinte imisebenzi ye-hormonal ne-endocrine, imisebenzi yokuzala, futhi abangele nokuphazamiseka kokuphefumula lapho evezwa, isikhathi eside! U-Anamika Sengupta we-Almitra Sustainables uveza izindlela zokwamukela izixazululo zemvelo zendlela yokuphila ehlanzekile nenobungani emhlabeni
Izixazululo eziphumelelayo zalezi zinto zokuhlanza ezenziwe ekhaya ezingaphephile nje kuphela futhi ezisebenzayo kepha futhi ezonga futhi zisebenzisa kakhulu izinto zasekhishini! Ake siqale ngama-ejenti ama-5 wokuhlanza ikhaya nokuthi angasiza kanjani ukugcina ikhaya lakho liphephile futhi lihle!
ungasusa kanjani izisihla ebusweni
I-Herb And Spice Ifakwe Uviniga
Yenziwe ngokumane kusetshenziswa amakhambi asekhaya nezinongo, noviniga omhlophe / we-apula cider, umuthi nesinongo okufakwe uviniga kungenye yezinto ezisebenza kahle kakhulu futhi eziqabulayo zokuhlanzela yonke inhloso emakhaya. Umuntu angasebenzisa amakhambi ahlukahlukene, njenge-mint, i-tulsi, i-lemongrass noma amaqabunga e-neem, nezinongo ezifana nesinamoni, i-clove, ne-ginger, ukufaka uviniga. Inhlanganisela ayikwazi ukusiza kuphela ukudala iphunga lesiginesha nokunambitheka kuketshezi lokuhlanza, futhi iza nezinto eziningi zokulwa nesikhunta, anti-virus, anti-bacterial. Kungenziwa nje ngokufaka amakhambi nezinongo ubusuku bonke, embizeni egcwele uviniga bese uxubanisa ingxube ukuze wakhe owokuhlanzela yonke injongo. Lokhu kungasetshenziswa njengokuhlanza indawo ngensimbi nakubumba, futhi kungasetshenziswa ngokuyixuba, ukuyihlanza njalo, noma ukungapholi, ezitsheni ezinenkani. Ngaphandle kwezinzuzo ezishiwo ngenhla, kuphephile futhi esikhumbeni futhi akunangozi ezungeze izingane nezinsana.
I-Lemon Ifakwe Uviniga
izinzuzo zamafutha e-alimondi ezinweleni
Enye inhlanganisela esetshenziswe ngempumelelo iminyaka yokhokho bethu, yinhlanganisela kalamula neviniga. Usebenzisa amakhasi kalamula, amakhekhe kalamula, namanye ama-citrus peels afana ne-orange ne-sweet lime, kuviniga, umuntu angakha i-ejenti yokuhlanza eqabulayo futhi enamandla. Yize ilungele zonke izinhlobo zokuhlanza, le nhlanganisela iphumelela kakhulu ekuhlanzeni izitsha, imishini yensimbi, usinki wasekhishini, ngisho nasezindlini zangasese nezangasese nokunye. Ukufaka ingcosana kasawoti ezitsheni ngamabala anenkani, nokusebenzisa ulamula kufakwe uviniga, akukwazi nje kuphela ukwenza izitsha zihlanzeke kepha futhi kusiza ekususeni iphunga lokudla.
I-Soapnut Multi-Purpose Acashile
Enye i-ejenti enamandla yokuhlanza yemvelo ama-soap-nati noma ama-reetha. Isetshenziswa ngokujwayelekile phakathi kwabathandi bokuhlanza bemvelo njengensipho yokuwasha esebenzayo, kulula ukwenza lokhu futhi kungalungiswa ezinhlanganisweni ezahlukahlukene, ekhaya. Ukusuka ekungeniseni amakhambi afana ne-tulsi, i-mint kanye ne-lemongrass ukufaka ama-peels e-orange nawolamula, lokhu kuhlanza kunikela ngokuhlanza okusebenzayo nokho okuphephile kwendwangu, phansi futhi kuye kwasetshenziswa njengokuhlanza izinwele.
Ukhukhunathi ube ngesinye sezithelo ezisetshenziswa kakhulu futhi ubusaziwa ngokusetshenziswa kwawo okuhlukahlukene. Ukufaka esikhundleni sokukhuhla okuvamile nge-coconut coir kuyindlela elula nephumelela kakhulu yokukhuhla. Ngaphandle kokuba i-exfoliator yemvelo, inezinto zayo ezihlukile ezilwa namagciwane, futhi yaziwa ukuthi iphephile ukusetshenziswa ezindaweni ezintekenteke nasebusweni obuqinile.
Ama-Bio Enzyme ayingxube yezinto eziphilayo - njengodoti wasekhishini, owenziwe ngoshukela wemvelo kanye nemvubelo / amabhaktheriya ngokwemvelo. Ukwenza lokhu, konke umuntu akudingayo yiziqu zezithelo nemifino, ijaggery noma ushukela onsundu, amanzi, kanye nesitsha sepulasitiki esiqinisa umoya. Ukwenza ama-Bio Enzymes ekhaya kusiza ukusebenzisa imfucuza yasekhishini nokuyiguqula ibe yisihlanzi semvelo esinamandla esingasetshenziselwa izinhloso ezinhle kakhulu.
Lezi zinhlobo zemvelo ezingenhla zombili ziphephile futhi zisebenza kahle kanti futhi zitholakala kalula futhi ziyonga. Ukufaka okunye kokuhlanza ikhaya lakho kuzosiza ukudala indawo ephephile nenhle ekhaya nasehhovisi.
ukususwa kwezinwele zobuso ngokwemvelo
Funda futhi: Izinto ezi-5 ezi-Dirtiest Ekhaya Lakho Nokuthi Uzihlanza Kanjani
I-dessert enempilo ye-vegan ukuzama: I-Chocolate Avocado Chia Pudding
Okuningi NgeNqubomgomo Yomshwalense Wezempilo Yomndeni
IB-Town ikhombisa indlela yokuthi ungabethela kanjani izitayela zemfashini eziqhubekayo
Izinzuzo ezi-8 eziphezulu zokuBhucungwa ubuso Okufanele Uzazi
Konke Okudingeka Ukwazi Ngomama Wokuqala waseMelika, uJill Biden
Khetha Izitayela Zekhanda Ezifanele zaseNdiya
Ukudla Oku-10 Okumele Kufakwe KuShadi Lakho Lokudla Ukuze Ukwehlise Isisindo
Ubuhle obumangazayo bubukeka kusuka kumiklomelo yama-Grammy ka-2021 Esidubulile
Izifundo Ezi-4 Zobuhle Ongazifunda KuDeveli Ugqoka Inkanyezi kaPrada u-Emily Blunt
Konke Ofuna Ukukwazi Ngejusi Yomoba
5 Kumele Ufunde Ababhali BaseNdiya Uma Umlando Ocebile Wezwe Ukuthakazelisa
Izizathu Ezinamandla Ezi-9 Zokuthi Kungani Kufanele Ushintshele Kokuhlanza Okungenantambo
Umagazini Robinsicecream - Yesikhulumi Lapho Abesifazane Ungathola Ukwaziswa Kwamuva Kanye Amathiphu Fashion, Ubuhle, Ezempilo Kanye Nobudlelwane.
Amafutha e-alimondi asetshenziselwa izinwele
ukuzivocavoca ukulahla amafutha esiswini ekhaya ngokushesha
indlela engcono yokuvimbela ukulahleka kwezinwele
ikhambi lasekhaya lokuwa kwezinwele nodaka
ukusinciphisa kanjani isisu ngokuzivocavoca umzimba
ukuzivocavoca ukunciphisa amafutha esiswini ekhaya
Okubalulekile kokukabili kokukodwa kwe-Wardrobe Ngalesi sikhathi Sesimo Sezulu Esihle
Ukufa Emndenini Wasebukhosini: INkosana uPhilip Ushona Eneminyaka engama-99
Izitayela zezinwele ezi-4 zokuphakamisa umdlalo wezinwele zakho kule sizini yomshado
Umklami Wezemfashini uSwapnil Shinde Uphuma NjengeTranswoman
Copyright ©2021 All rights reserved | robinsicecream.com | Inqubomgomo Yobumfihlo